डान्सर नोराको टिकटक भिडियोले छोटो समयमै पायो ६३ मिलियन भ्यूज (भिडियोसहित) – Online Nepalaja
February 12, 2021 114
बलिउड डान्सर नोरा फतेहीले टिकटकमा एक भिडियो जारी गरेकी छिन् । उक्त भिडियोलाई २४ घण्टामा टिकटकमा ४० मिलियनभन्दा बढी भ्यूज पुगेको छ ।भिडियोलाई टिकटकमा दर्शकले अझै मन पराई रहेको छन् । आफैं अभिन्य गरेकी उक्त गीत साकी साकी डान्समा एक सुन्दर स्टेप गर्दै गरेको देखिन्छिन् जसलाई र्हेनेको सख्या ४ करोड भन्दा माथि पुगेको छ ।
जोन अब्राहम अभिनित चलचित बाटला हाउसमा नोरा छोटो भूमिका देखा परेकी थिइन् । स्ययम् आफुले नै अभिन्य गरेकी सो गीत दर्शकले खुब रुचाएका थिए । नोरा क्यानडाकी नागरीक हुन् ।उनी बलिउडमा आफनौ करिअर बनाउन भारत आएकी हुन् । उनी अहिले केही बलिउड चलचित्रमा काम गरिरहेकी छिन् ।
यो पनिपढ़नु होस:राम्रो हुन कसलाई मन लाग्दैन र ? आफु सुन्दर देखिन सबैले प्रयाश गर्दछन्। आज हामी अनुहार सुन्दर देखाउने केहि घरेलु उपायबारे चर्चा गर्नेछौः
१) अनुहारमा निखारता ल्याउन कागतीको रस गुणकारी मानिन्छ। कागतीको रसले अनुहारको फोहोर बाहिर ल्याउँछ र छालालाई कोमल बनाउँछ।
यसका लागी नियमित रुपमा कागतीको रस अनुहारमा लगाएर दश मिनेट राख्ने र चिसो पानीले पखाल्ने गर्नुपर्छ।
२) बेसारको धुलो, बेसन र कागतीको रस मिसाएर लेप बनाई अनुहारमा लगाइ १० मिनेट राखेर पानीले पखाल्ने गरेमा यसले पनि अनुहारमा चमक ल्याउँछ। यो विधि सातामा चार पटकसम्म दोहोर्याएमा अनुहारको दाग हराउने र छालालाई मुलायम बनाउँछ।
यस कारण लाग्छ दाँतमा पाइरिया, यसरी पाउन सकिन्छ छुटकारा
३) अनुहारको छाला सुख्खा र खस्रो छ भने दुध र मह मिसाएर लगाउने गरेमा अनुहारको सुख्खापन हराउदै जान्छ।
यसका लागी एक चम्चा दुधमा एक चम्चा मह मिसाएर अनुहारमा लगाउने र हल्का मालिस गर्ने र १५ मिनेटपछि सफा गरेमा अनुहारको सुख्खापन हराउँदै जान्छ।
४) मेवा पिसेर त्यसको पेस्ट बनाइ अनुहारमा लगाएर २० मिनेटपछि सफा गर्दा अनुहारमा निखारता ल्याउँन सक्छ।
५) टमाटर र कागतीको रस मिसाएर अनुहारमा लगाउँदा अनुहार सफा हुँदै जान्छ। घाममा धेरै हिँड्नेहरुका लागि यो उपाय निकै फाइदाजनक हुन्छ।
Prevगम्भीर आरोप लागेपछि श्वेताको आँखाभरि आँसु : म मर्दा मेरो लासको चिता माझि बस्तिको आँगनमै होस् ……(भिडियो सहित
Nextकन्चनको अ’बस्थालाई लिएर नि’राश हुदै बोले डाक्टर प्रदिप, नि’कै दु’ख लागेको छ ! (हेर्नुस् भिडियो)
विनय हिरासतमा पुगेपछि पुजाको आयो प्रतिकृया, विनयजंगको मोवाइलमा सपनाको नां गा तस्बिर पठाउने ब्यक्तिको गरिन् खुलासा (भिडियो हेर्नुस्)